ကျန်းမာရေးဗဟုသုတ Archives - MM Live News
ခွဲစိတ်ရင် (၁၀) သိန်းအထက်ကုန်ကျနိုင်မယ့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါကို တစ်ပြားမှမကုန်ဘဲ ပျောက်ကင်းသက်သာသွားတဲ့ ဆေးနည်း
” ခှဲစိတျရငျ (၁၀) သိနျးအထကျကုနျကနြိုငျမယျ့ နှလုံးသှေးကွောကဉျြး ရောဂါကို တဈပွားမှမကုနျဘဲ ပြောကျကငျးသကျသာသှားတဲ့ ဆေးနညျး “ နှလုံး သှေးကွောကဉျြးပွီး အသကျရှူုမဝ၍ ဆရာဝနျနှငျ့ပွ၊ဆေးမြားသောကျသျောလညျး သကျသာလှသညျ မဟုတျပါ။ နုလုံး အထူးကုဆရာဝနျကွီးနှငျ့ပွကွညျ့ရာ ခှဲစိတျဖို့အကွံပေးပွီး ရကျခြိနျးပေးထားသညျ ဆိုပါသညျ။ထိုသူငယျခငျြး ကံကောငျးသညျဟု ဆိုရပလေိမျ့မညျ။ ဖဘေု့တျပျေါမှဆေးနညျးကောငျးလေးတဈခုရ၍ခှဲစိတျခငျြသောစိတျဆန်ဒလညျးမရှိသောကွောငျ့ထိုဆေးနညျးလေးအားအားကိုးအားထား ကာ ဆေးညှနျးအတိုငျးဆောငျရှကျခဲ့ပါသညျ။ ကွကျသှနျဖွူ သူငယျခငျြးအားလညျးမခှဲစိတျစခေငျြပါအကွောငျးကားခှဲစိတျမညျဆိုပါကသိနျး(၁၀)အထကျသာကုနျကမြညျဖွဈပွီးဝနျထမျးတဈယောကျ၏လစာအခွအေနနှေငျ့ လုံးဝမလှယျကူသောကွောငျ့ဖွဈလသေညျ။သူငယျခငျြးဆုတောငျးပွညျ့ပါသညျ။ ခှဲစိတျစရာမလိုတော့ပါ။နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါ သိသိသာသာသကျသာသှား၍ဖွဈ လသေညျ။ထိုဆေးနညျးမှာ…. (၁)ခငျြးစိမျးသတ်တုရညျလကျဖကျရညျပနျးကနျ(၁)ခှကျ၊(၂)ကွကျသှနျဖွူသတ်တုရညျလကျဖကျရညျပနျးကနျ(၁)ခှကျ၊(၃)ရှောကျရညျလကျဖကျရညျပနျးကနျ(၁)ခှကျ၊(၄)ပနျးသီးရှာလကာရညျလကျဖကျရညျပနျးကနျ(၁)ခှကျထို(၄)ခှကျအားဆတူရော၍ (၃)ခှကျလြှငျ (၂)ခှကျကနျြအောငျ ကြိုရပါမညျ။ ခငျြးစိမျး ထို(၃)ခှကျ(၂)ခှကျစာကနျြပါကပြားရညျစဈစဈလကျဖကျရညျပနျးကနျလုံး(၃)ခှကျနှငျ့နနှငျးမှုနျ့ကှမျးသီးလုံး(၁)လုံးစာမြှထညျ့မှပွေီးတဈညအိပျနှပျထားရပါမညျ။ တဈနလြေှ့ငျထမငျးစားဇှနျး(၁)ဇှနျးသောကျပါ။ပနျးသီးရှာလကာရညျကိုအသငျ့ဝယျယူ၍ရနပေါပွီ။ ထိုဆေးနညျးမှာနက်ခတ်တရောငျခွညျတှငျဖတျရှုရသောမောငျအေးကွူ(စီးပှားရေး)၏နှလုံးသှေးကွောကဉျြးဝဒေနာရှငျမြားအတှကျမှ ထုတျနုတျဖျေါပွခွငျးဖွဈပါသညျ။ နှလုံးသှေးကွောကဉျြးရောဂါသကျသာသညျမှာအမှနျဖွဈပါ၍ထပျဆငျ့ဝငှေလိုကျပါသညျ….။လိုသူယူသုံးစိတျနှလုံးရှငျပွုံးနိုငျပါစေ…။ ရဲမြိုးသူ(ဗောဓိမွိုငျ) (zawgyi) ” ခွဲစိတ်ရင် (၁၀) သိန်းအထက်ကုန်ကျနိုင်မယ့် နှလုံးသွေးကြောကျဉ်း ရောဂါကို တစ်ပြားမှမကုန်ဘဲ ပျောက်ကင်းသက်သာသွားတဲ့ ဆေးနည်း “ နှလုံး […]
ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူများ စမ်းကြည့်ပါ ….အကျိုးမယုတ်ပါဘူး
ယနေ့ည လက်တွေ့စမ်းကြည့်တာ ဆား (၅၀ )သားလောက် ရေနွေးနဲ့ခြေထောက်ကို နာရီဝက်လောက်စိမ်ထားပြီး ခြေဖဝါးကို ဆားနဲ့ပွတ်တာ ….. ပြီးတော့ပြောင်အောင်သဘက်နှင့်သုတ်လိုက်တယ် ….ကိုယ်မှာချွေးများထွက်လာပြီး ညောင်းတာကိုက်တာပေါ့သွားတယ် …..အပူလည်းတော်တော်ထွက်တယ် …. ဒီနည်းတိုင်း သုံးရက်လောက် လုပ်ကြည့်မယ်ဆိုရင် ညောင်းတာကိုက်တာ အပူများတာ ကျန်တဲ့ရောဂါတစ်ချို့ သက်သာလာမှာသေချာတယ် ….. ထို့ကြောင့်ကျန်းမာရေးလိုက်စားသူများ စမ်းကြည့်ပါ …အကျိုးမယုတ်ပါဘူး ။ ။ နောက်တစ်နည်း နေ့ စဉ် အ ချိန် မှန် ည အိပ်ယာဝင် ခါနီး တိုင်း… ဆားနင်းခြင်း…… ဆားနင်းရင် ကိုယ်တွင်းအောင်းပူတွေ ထွက်စေသည်။ နင်းပုံနင်းနည်းကတော့ … မနင်းခင် ခြေထောက်ကို.. ပေါင်ရင်းကစပြီး ရေလောင်းဆေးပါ..ခြောက်အောင်သုတ်ပါ…။ ဆား ၁ ပိဿာ (၂ပိဿာဆို ပိုကောင်း) ဆန့်တဲ့ ဇလုံကြီးထဲထည့်ပြီး […]
” ဆီးချို​ရောဂါ​ဝေဒနာ အမြစ်​ပြတ်​သက်​သာ​ပျောက်​ကင်း​​စေတဲ့နည်း ​တစ်​ပတ်​( ၁)ကြိမ်​ (၃)ကြိမ်​စားပြီးပါက ဆီးချို​ရောဂါ အ​ခြေ​နေကို ပြန်​လည်​စမ်းသပ်​ရန်​ (၆)လခွဲ စွဲစားပါက အမြစ်​ပြတ်​​ပျောက်​ကင်း​ကြောင်း ဖတ်​ရှုရသဖြင့်​ ပြန်​လည်​မျှ​ဝေခြင်းဖြစ်​ပါသည်​ ( နက္ခတ်​တ္ထ​ရောင်​ခြည်​မဂ္ဂဇင်း)ပါ ​ဆေးနည်း ​ဆေးနည်း ဆီးဖြူသီး (၁၀)လုံးနှင့်် ငါးရံ့ (၁၀)ကျပ်​သား ​ရောချက်​စားရုံသာ (၃)ကြိမ်​မျှစားရုံဖြင့်​ ဆီးချိုလက်​​တွေ့သက်​သာ​ကြောင်း​တွေ့ရှိ၍ (၆)လခွဲ စွဲစားပါက အမြစ်​ပြတ်​​ကြောင်း သတင်း​ကောင်းပါးအပ်​ပါသည် အထက်​ပါ ဓာတ်​စာစား​နေချိန် ကာလအတွင်း၌ အချိုရည်​မျိုးစုံများ အချိုဓာတ်​ပါရှိ​သောအစားအ​သောက်​များ . အထူးသဖြင့်​ သရက်​သီးမှည့်​ ပိန္နဲသီး ဒူးရင်း​ရှောက်​ချိုသီး လိ​မ္မော်​သီး ကျွဲ​ကောသီး ကြက်​​မောက်​သီးနှင့်​ ​ကောက်​ညှင်းများကို ​ရှောင်​ကြဉ်​ရပါမည်​ နက္ခတ်​တ္ထ​ရောင်​ခြည်​မဂ္ဂဇင်း အမှတ် ၃၆၉( ဧပြီလ ၂၀၁၇)မှ ပြန်​လည်​ကူးယူတင်​ပြပါသည်​ ။ credit MyMc Unicode […]
အဆိပ်သင့်သွားတဲ့ မိသားစုကို သဲအုပ်ပေးပြီး အရေးပေါ်ကုသ ပေးနေတဲ့ မှိုအဆိပ်ကုထုံး…
မှိုအဆိပ်ကုထုံး May 30 ,2019 လာအိုနိုင်ငံမှာ အဆိပ်၇ှိတဲ့ အက်ဖလာတောဆင်aflatoxin ဓါတ်ပါ မှိုစားမိလို့အဆိပ်သင့်သွားတဲ့ မိသားစုကို သဲအုပ်ပေးပြီး အရေးပေါ်ကုသ ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိပ်သင့်မှိုစားပြီး လေးနာ၇ီမှ ခြောက်နာ၇ီအတွင်း အဆိပ်တက်လာပြီဆိုရင် မှိုဆိပ်ဟာ အစာအိမ်နဲ့သွေကြောတွေ မှာ ရောက်သွားပြီးရင်…. (၁) ၀မ်းဗိုက်က မခံနိုင်အောင်း အောင့်လာမယ်။ (၂)ခေါင်းကိုက် (၃)အစာတွေပြန်အန်မယ် (၄) ၀မ်းတွေ(မစင်-)အကြိမ်ကြိမ်သွားမယ်။ (၅) ကိုယ်အပူချိန်မြင့်တက်မယ်။ (၆) တကိုယ်လုံးအဖုအပိန့် များထွက်ခြင်း- ဆေးရုံနဲ့ဝေးတဲ့ဒေသတွေမှာ ကုသမှု လွဲရင် အသက်သေဆုံးမှု အများဆုံး ဖြစ်နေတဲ့ မှိုအဆိပ်ပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ မှိုအမျိုးပေါင်း ၃၈၀၀၀ ကျော်ရှိနေတာကြောင့် စာကောင်းမှိုနဲ့အဆိပ်ရှိ မစားသင့်မှိုကို […]
ပဲပြားများနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး FDA က “အထူးသတိပေး ကြေငြာချက်” ထုတ်ပြန်ထား မုံရွာမြို့နယ်ရှိ သာစည်ဈေးနှင့် သံလမ်းဈေးများတွင် ရောင်းချလျှက်ရှိသော အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ(I)စာလုံးပါရှိသည့် ပဲပြားအစိုတုံးများတွင် ခွင့်မပြုဓာတုပစ္စည်း(Formalin)(ဖော်မလင်)များ ပါရှိကြောင်း………. စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသဖြင့် ၎င်းအမှတ်တံဆိပ်ပါ ပဲပြားများအား ၀ယ်ယူရောင်းချခြင်း၊ စားသုံးခြင်းများ မပြုလုပ်ကြရန်နှင့် ထပ်မံဝယ်ယူရောင်းချခြင်း ပြုလုပ်ပါက အမျိုးသားအစားအသောက်ဥပဒေအရ ထိရောက်စွာ အရေးယူသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး FDA က အသိပေးကြေငြာထားသည်။ The Ladies News ဖော်မလင် (FORMALIN) အကြောင်း သိကောင်းစရာ ဖော်မလင် (Formalin) အကြောင်း သိကောင်းစရာ ဒေါက်တာဒေါ်ဇင်ဇင်နွယ် ညွှန်ကြားရေးမှူး (အငြိမ်းစား) အစားသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေး ဦးစီးဌာန နှင့် တွေ့ဆုံခြင်း Q. ဖော်မလင် အကြောင်း သိပါရစေ ဆရာမ။ A. […]
အားအင်ကုန်ခမ်းခြင်း၊ ဟော်မုန်းဓာတ်လျှော့နည်းခြင်းမောပန်းလွယ်ခြင်း၊ အာရုံကြော အားနည်းခြင်းတို့အတွက် ဆေးနည်းကောင်း…..
သားသမီးမရသော ကျား၊ မ မိတ်ဆွေများ ဟော်မုန်းအားနည်းသူများ၊ အားနည်းပိန်လှီသူများ၊ သွေးအားနည်းသူများ၊ အဖေါအရောင် ဝေဒနာရှင်များအတွက် အလွယ်ကူဆုံး အကောင်းဆုံးတွေထဲကအကောင်းဆုံး… !ဆေးနည်းလေးတစ်ခု မျှဝေလိုက်ပါတယ်။ ဒီဆေးနည်းတွေဟာ လက်တွေ့စမ်းသပ်ပြီးသား ဆေးနည်းမူမှန်တွေဖြစ်သည့်အတွက် မည်သူမဆို ဘေးကင်းစိတ်ချစွာ ဖေါ်စပ်သုံးဆောင်နိုင်ကြပါသည်။ ယနေ့ခေတ်မှာ ဆေးပညာထက် ဆေးနည်းကိုသာ အလွယ်တကူ ယူလိုသူများကြပါသည်။ ဆေးဆရာလုပ်သူတွေက မဟုတ်မမှန်တင်ပါက အများအတွက် ဘေးဖြစ်နိုင်သည့်အပြင် အကုသိုလ်များလှပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်… ဆေးစစ် ဆေးမှန်များကိုသာ တင်ပြပေးကြရန်လည်း တိုက်တွန်းအပ်ပါသည်။ လူ ၁၀၀တွင် ၈၀ လောက်တည့်သော အက်ျိုးရှ်ိသောဆေးဖြစ်ပါကထိုဆေးသည် … !ကောင်းမြတ်သောဆေးဖြစ်ပါသည်။ ဒါကြောင့် လူတိုင်းနှင့်သင့်တော်သော ဤဆေးနည်းကို တင်ပေးလိုက်ပါသည်။ ဆေးနည်း….. ၁။ ဖလံတောင်ဝှေးဥ ၁၀ သား ၂။ နွယ်ခ်ျို ၁၅ ကျပ်သား […]